Murashaxoow haddii aad guuleysato maxaa ku horyaal? - Caasimada Online
Home Maqaalo Murashaxoow haddii aad guuleysato maxaa ku horyaal?
Muqdisho (Caasimada Online) –Toddobaad ayaa ka harsan xiliga doorashada madaxtinimada Somalia, oo la filayo in ay ka dhacdo 15-ka May teendhada Afisyooni ee xeyn-daabka xerada ATMIS. Ku dhawaad 50 Musharax iyo ka badan ayaa la maleyn karaa inay u taagnaan karaan iney ka qeyb galaan tartankaasi hoggaanka Madaxtinimada dalka oo aysan ku jirin wax dumar ah.
Shuruudaha tartanka aasaas u noqon doona ayaa la filayaa qaarkood ama intooda badan in ay ku haraan ama sheegtaan tanaasul, ka hor doorashada inta aan la qaban tiradana aysan ka badnaan doonin 20 murashax.
Sida caadadu tahay, murashaxiinta qaar ayaa damacoodu kaliya yahiin xil iyo xoolo doon, halka qaarka kalena loo maleyn karo inay wataan qorshe siyaasadeed qaran, inkastoo istaraatiijyada doorashadu tahay midda Madaxweynaha iyo Afhayeenka Baarlamaanka in ay ku yimaadaan doorasho cod aqlabiyad ah oo ka yimid laba gole qabiil ee u taagan Baarlamaan hoose iyo mid sarre.
Maba jiraan nidaam iyo habab rasmi ah ee la xiriira tirakoob dadweyne iyo diiwaangelin jiritaan xisbiyo sharciyaysan. Qaab guracan oo aan xalaal ahayn ayay ku yimaadeen Goloyaasha qabiil, waxa lagu magacaabay , “Aqalka Sare iyo Aqalka hoose”, oo iyagana soo doortay Afhayeenadooda iyo Madaxweynaha oo la sugaayo.
Murashax walba waaxqabadkiisa wuxuu ku kooban yahay kaliya, si is-tustus ah iyo inay shirar u qabtaan dadka kuna kala qaybsan qabiil-qabiilka. waxay hadda bilaabeen iney gudbiyaan fikrado siyaasadeed oo aan horay looga baran iyo qorshaha ay ku dhiqi doonaan marka ay guuleystaan. Qaar taageerayaal ah wey ku qancayaan, laakiin waxaa mudan in la is weydiiyo shaqsiyadda hoggaan ee hormuudka u ah Xisbiga magac u yaalka ah ama murashaxa halkee ayuu gaari karaa marka laga baxo ololaha doorashada.
Mohamed Abdullahi Farmaajo: Murashaxa Nabad iyo Nolol, ka hor xilka madaxweyne muddo lix bil ku siman ayuu ahaa Wasiirka koowaad. Xilkaas ka hor, ma ahayn shaqsi hore siyaasadda looga yaqiin, laakin waxaa keenay waqtiga iyo awood-qaybsiga 4.5. Sida uu ku sheegtay taariikh-nololeedkiisa markii xilka wasiirka koowaad oo ka bilaabay jago siyaasadeed ee uu qabto, wuxuu degganaa muddo labaatan sanno ah, dalka Mareykanka oo jinsiyaddiisa haystay, wax ku bartay, ku guursaday, kuna ilmo dhalay.
Xasan Sheekh Maxamuud: Madaxweynihii xafiiska ku wareejiyay Farmaajo, wuxuu halgan adag kadib ku guuleystay doorashadii Sep-2012-kii, wuxuu ahaa nin howlaha samafalka iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada rayidka magac weyn ku lahaa. Lixdii qodob ee tiirka u ahaayeen qorshe siyaasadeedkiisa ayuu ku galay ololihii doorashada. wuxuuna ka faa’iideystay khilaafkii siyaasadeed ee Madaxweyninimada.
Xasan wuxuu markii danbe damaciisa u gudbay isaga iyo saaxiibadiisa dhinaca waxbarashada inay siyaasadda ku biiraan, iyagoo ungay Xisbiga Nabadda iyo Horumarka (PDP), kaasoo markii danbe guuleystay. Haddana wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in mar kale guul uu gaaro. Hassan Sh. Maxamuud wuxuu 2012-16 soo hoggaamiyay dowlad aan KMG ahayn, dunidana ka kasbatay aqoonsan caalami ah. Wuxuu dagaal adag la galay arxgaxisada Al-Shabaab oo u ka xureeyay degaamo badan oo ay magaalo madaxda ka mid tahay.
Waxaa si weyn u dalka ka hirgeliyay oo soo dhammeystirmay maamul goboleeyadii nidaaamkii Federaalka, waloo aan lagu guuleysan jiritaankii Asxaabta, tirakoobkii dadka iyo xoolaha, doorasho ku saleysan qof iyo cad iyo inaan weli dhammeystirmin dhismaha ciidamada qalabka sida iyo in Somalia laga qaado cunuqabateyntii hubka ee QM saartay sannadkii 1992
Xasan Cali Kheyre: Madaxweyne Farmaajo ayaa 1-dii Maarso 2017 usoo xushay ra’iisul waasarahiisa una arkay mid ay wada shaqeyn karaan mudo xileedkii afarta sano dastuurka xeeriyay. Xasan Cali Kheyre oo difaac adag u noqday dowladdii Nabad iyo Nolol wanaag iyo xumaanba wixii ay fashay.
Saciid Cabdullaahi Deni: Magaalada Muqdisho ayuu ku dhashay sanadkii 1966-kii. wuxuuna kasoo qalin jabiyay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kulliyadda luuqadaha, isagoona takhasuskiisa kusoo qaatay dalka Malaysia kahor inta uusan siyaasaddda ku biirin.
C/raxmaan C/Shakuur Warsame: Wuxuu kaligiis shantii sano lasoo dhaafay ahaa hoggaamiye iskiis isu waday, dagaalna kula jiray Farmaajo iyo ra’iisul wasaarihiisii uu eryay ee Xasan Cali Kheyre kana tirsanayo eedo badan. CCShakuur oo wasiirkii qorsheyntii iyo xiriirka caalamiga DKMG soo noqday, waa markiisii labaad ee uu tartamo.
Daahir Maxamuud Geelle: Waxaa lagu tiriyaa murashaxiinta qunyur socodka ee Xarakada Al-Islaax, Waa hoggaamiye deganaan badan muujiya, xilal kala duwana kasoo qabtay dowladihii KMG. Damaciisa waa inuu noqdaa madaxweynaha Somalia, waxaase ka horeeya wado dheer oo u baahan in uu ka gudbo imtixaanka ku hor gudban. Daahir Maxamuud Geelle oo diinta Islaamka si wanaagsan u yaqaan waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay murashaxiinta faraku tiriska ee ururada diimeedka Carbeed ku xeran.
Eng. C/llaahi Cali Xasan: Wasiirkii hore ee Ganacsiga iyo Warshadaha isagana waa murashax, waa aqoonyahan dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bini’aadanimada wax badan kasoo qabtay 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
C/qaadir Cosoble: Waa Xildhibaan qaran, waana markii seddaxaad uu u tartamo hoggaaminta dalka, hase ahaatee nasiibka u hiilin waayay. Ganacsade C/qaadir Cosoble, waa wadaad si fiican u bartay diinta Islaamka, wuxuu murashaxiinta kale ee Daahir Maxamuud Geelle, C/kariin Guuleed iyo Saciid Deni kala mid yahay ka mid ahaanshaha ururada diimeed ee firqooyinka u kala qeybsan.
Dr. Cabdinaasir Maxamed: Waa dhaqtar Soomaaliyeed oo haysta dhalashada Mareykanka, waxna ku bartay, kuna ceeshay in badan, waxaa damac ugu jiraa inuu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya, in badan xaalada Soomaaliya kama war qabo maadaama qurbaha uu ku raagay, shaqsiyadiisa cid wax badan ka og ma jirto, waxaana maqalkiisa iyo muuqaalkiisa dadku arkeen 2016-kii markii magaalada Minneapolis ugu dhawaaqay murashaxnimadiisa. Waxaa uu qooto qooto ku rabaa cododka xildhibaano ku heyb ah.
Jabriil Ibraahim Cabdulle: Waa aqoonyahan in badan ka og xaalada dalka, ururada bulshada rayidkana kusoo dhex jiray mudo badan, wuuu Muqdisho ugu dhawaaqyay inuu yahay murashax awood u leh in dalka uu ku hoggaamiyo nidaam ka duwan madaxdii soo maray dalka ee hanti boobka ku caan baxay, laakiin Jabriil maxay dadka ku yaqaanaan?.